ER32 Chuck Collets, ER နွေ Collets, ER32 Chuck နွေ Collets, ER Clamp Collet ၏တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ
Home > ထုတ်ကုန်များ > နွေဦး ColletsER Collets
ER Collets ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ER32 Chuck Collets, ER နွေ Collets ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ER32 Chuck နွေ Collets R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Precision ER32 Mills Collet Chuck ER နွေဦး Collet
Precision ER32 Mills Collet Chuck ER Collet
သံမဏိစံ DIN6499B နှင့်အတူ ER collets clamps
အရည်အသွေးမြင့်မား ER A / C Collet ရေနံအပေါက်ပုံစံ Collet
မြင့်မားသော Precision ER20 10 မီလီမီတာနွေ Collets
မြင့်မားသော Precision နွေ ER25 0.008mm 16mm Collets
မြင့်မားသော Precision 65MN 0.008mm ER 25 Collets
High တိကျပြတ်သားမှု 0.008mm ER32 65Mn Spring Collets
တိကျပြတ်သားမှု 0.008mm ER20 နွေ Collets
မြင့်မားသော Precision 65Mn ER40 နွေ Collets
BT40 collet Chuck များအတွက်နွေဦး collet clamping ER20
မြင့်မားသော Precision သတ် ER Collet ER32 နွေ Collet
BT er collet Chuck အစုံ
CNC ခုံစိတျအပိုငျး 5c collets
High Quality ERG ပုတ် Coliets
0.005mm အမြင့် Precision ER Collets
High Quality ER40 ER နွေ Collets
CNC ခုံစိတျအပိုငျး ERG ကိုထိပုတ်ပါနွေဦး collet
CNC ခုံစိတျအပိုငျး ERC နွေဦး collet
CNC ခုံစိတျအပိုငျး set ER40 collets
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 10 - 12.5 / Piece/Pieces
သံမဏိစံ DIN6499B နှင့်အတူ ER collets clamps 1.Milling Collet ပစ္စည်း 65Mn, အပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်, ကုသမှုအိုမင်း -180 ဒီဂရီ cryogenic ကုသမှုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတိုးမြှင့်, ER Collets ၏ဘဝနှင့်တည်ငြိမ်ရေးကိုတိုးမြှင့် 2. သာမန်အတွင်းစိတ်အပေါက် grinder ထုတ်ကုန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ER Collets...
ER A / C Collet ရေနံအပေါက်ပုံစံ Collet 1. 65Mn ER Collets; HRC: 44-482။ Oli ပေါက်အမျိုးအစား collets 3. DIN6499B ER Collets
မြင့်မားသော Precision ER20 10 မီလီမီတာနွေ Collets အမြင့်အကြမ်းခံနှင့်အတူ 1. ER Collets 2. 65Mn ER Collets; HRC: 44-48 သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများအတွက် 0.008mm သို့မဟုတ် 0.015mm အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. Precision ။ 4. DIN6499B ER Collets...
မြင့်မားသော Precision 65MN 0.008mm ER 25 Collets အမြင့်အကြမ်းခံနှင့်အတူ 1. ER Collets 2. 65Mn ER Collets; HRC: 44-48 သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများအတွက် 0.008mm သို့မဟုတ် 0.015mm အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. Precision ။ 4. DIN6499B ER Collets...
တိကျပြတ်သားမှု 0.008mm ER32 65Mn Spring Collets တူးဖော်ခြင်း, ကြိတ်, နှိပ်ခြင်းနှင့်ကြိတ်အပါအဝင်အပြောင်းအလဲနဲ့အမျိုးမျိုးများအတွက်အသုံးချ 1. DIN6499B ER Collets 2. 65Mn ER Collets; HRC: 44-48 0,008 သို့မဟုတ်သင့်ရွေးချယ်မှုများအတွက် 0.015mm အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. Precision ။ အမြင့်အကြမ်းခံနှင့်အတူ 4. ER Collets...
တိကျပြတ်သားမှု 0.008mm ER20 နွေ Collets တူးဖော်ခြင်း, ကြိတ်, နှိပ်ခြင်းနှင့်ကြိတ်အပါအဝင်အပြောင်းအလဲနဲ့အမျိုးမျိုးများအတွက်အသုံးချ 1. DIN6499B ER Collets 2. 65Mn ER Collets; HRC: 44-48 0,008 သို့မဟုတ်သင့်ရွေးချယ်မှုများအတွက် 0.015mm အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. Precision ။ အမြင့်အကြမ်းခံနှင့်အတူ 4. ER Collets အဓိကအားဖြင့်...
High Quality 65Mn 0.008mm ER40 နွေ Collets တူးဖော်ခြင်း, ကြိတ်, နှိပ်ခြင်းနှင့်ကြိတ်အပါအဝင်အပြောင်းအလဲနဲ့အမျိုးမျိုးများအတွက်အသုံးချ 1. DIN6499B ER Collets 2. 65Mn ER Collets; HRC: 44-48 0,008 သို့မဟုတ်သင့်ရွေးချယ်မှုများအတွက် 0.015mm အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. Precision ။ အမြင့်အကြမ်းခံနှင့်အတူ 4. ER...
BT40 collet Chuck များအတွက်နွေဦး collet clamping ER20 ER20 Clamp နွေ Collet 1) ကျွန်ုပ်တို့၏ ER collet ၏ Runout 0.005mm-0.015mmm အတွင်းများမှာ 2) ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 နှင့် ER50 collet 3) အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိဖန်ဆင်း: 65Mn 4) Pack: အတွင်းစိတ်ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်စက္ကူသေတ္တာဖြစ်ပါသည်,...
မြင့်မားသော Precision သတ် ER Collet ER32 နွေ Collet မြင့်မားသော Precision ER20 Collets ER Collet နယူးအမှတ်တံဆိပ် On-line ကိုသစ်ကိုထုပ်ပိုး, နည်းပညာအသစ်, တိကျ, အရည်အသွေး, ကြာရှည်ခံမှု, တည်ငြိမ်မှု, တည်ငြိမ်မှု, ER COLLET အအေးခံ အထူးတပ်ဖွဲ့ထုတ်ကုန်တိကျမှန်ကန်မှု,...
Supply နိုင်ခြင်း: 1000000 piece/year
BT er collets Chuck အစုံ Precision: 0,015 သို့မဟုတ် 0.01 Collet ခွန်အား: HRC48-50 အပါအဝင်: ER25 / ER32 / ER40 သတ်မှတ်မည် သံချေး-အထောက်အထား:...
CNC ခုံစိတျအပိုငျးကိုင်ဘို့ uesd 5c collets အဆိုပါရှုး 5C collet: 1.Material: 65Mn 2.Hardness: clamping တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း HRC55-60 elastic တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
High Quality ERG ပုတ် Coliets High Quality ERG ပုတ် Coliets လည်းနွေဦး collet အဖြစ်လူသိများနေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း \_ ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ် Chuck ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ယင်း၏ function ကိုလေ့ကျင့်ခန်းရှုးသို့မဟုတ်ဓားညှပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် collet လက်ရှိလူသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။...
0.005mm မြင့်မားသောတိကျ ER Collets Size: ER32-0.005mm Collets ပစ္စည်း: 65Mn တိကျမှန်ကန်မှု: 0.015mm, 0.008mm, 0.005mm Hard: HRC44-48 အမြင့်အကြမ်းခံနှင့်အတူ ER
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1.95 - 2.2 / Piece/Pieces
High Quality ER40 ER နွေ Collets 1. အသက် 65 MN သို့မဟုတ် 45 # သံမဏိ 0,005 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 2. Precision; 0,008 သို့မဟုတ် 0.015mm 3. HRC: 44-48 4. အမြင့်အကြမ်းခံ 5.
CNC ခုံစိတျအပိုငျး ERG ကိုထိပုတ်ပါ collet 1 ။ DIN6499B ERG collets 2. 65 MN ERG collets 0,005 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. Precision; 0,008 သို့မဟုတ် 0.015mm 4. HRC: 44-48 ERG collets 5. အမြင့်အကြမ်းခံ ERG collets တူးဖော်ခြင်း, ကြိတ်, နှိပ်ခြင်းနှင့်ကြိတ်အပါအဝင်အပြောင်းအလဲနဲ့အမျိုးမျိုးများအတွက် 6....
CNC ခုံစိတျအပိုငျး ERC နွေဦး collet 1 ။ DIN6499B ERC collets 2. 65 MN ERC collets 0,005 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. Precision; 0,008 သို့မဟုတ် 0.015mm 4. HRC: 44-48 ERC collets 5. အမြင့်အကြမ်းခံ ERC collets...
er collet များအတွက် ER40 အမြင့်တိကျစွာနွေ Collets 1. DIN6499B ER collets 2. 65 MN ER collets 0,005 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. Precision; 0,008 သို့မဟုတ် 0.015mm 4. HRC: 44-48 ER collets 5. အမြင့်အကြမ်းခံ ER...
တရုတ်နိုင်ငံ ER Collets ပေးသွင်း
အဆိုပါစံ ER collet ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအသုံးများ Clamp ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
အလွိုင်းနွေဦးကိုသံမဏိကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်အပြည့်အဝခိုင်မာစေခြင်း, ER collets နှိပ်ခြင်းနှင့်ကြိတ်, reaming, ကြိတ်ငြီးငွေ့စရာအပါအဝင်များစွာသောစက် application များအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။
1) ကျွန်ုပ်တို့၏ ER collet ၏ Runout 0.005mm-0.015mmm အတွင်းများမှာ
2) ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 နှင့် ER50 collet
3) အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိဖန်ဆင်း: 65Mn
4) Pack: အတွင်းစိတ်ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်စက္ကူသေတ္တာဖြစ်ပါသည်, ပြင်ထုပ်ပိုးပုံးဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအတိကျမှန်ကန်မှု 0.008mm, ဒုတိယတိကျမှန်ကန်မှု 0.015mm: 5) ကြှနျုပျတို့ပုံမှန်အားဖြင့်တိကျမှန်ကန်မှုနှစ်မျိုးရောင်းချလျက်ရှိကြသည်။ အမြင့်ဆုံးတိကျမှန်ကန်မှု 0.005mm ဖြစ်ပါတယ်။
ER32 Chuck Collets
ER နွေ Collets
ER32 Chuck နွေ Collets
ER Clamp Collet